Post ကိုန်ဆောင်မှုများအဘို့ဆုချီးမြှင့်ပြိုင်ပွဲစစ်သားစုဆောင်းရေးအလင်းသံ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Post ကိုန်ဆောင်မှုများအဘို့ဆုချီးမြှင့်ပြိုင်ပွဲစစ်သားစုဆောင်းရေးအလင်းသံ
အလင်းကိုသံ, post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုကိုအထူးပြုတဲ့ Panavision ကုမ္ပဏီ, တဖနျထင်ရှားတဲ့ Episode စီးရီးယခုရာသီနှင့်အတူအရေးပါသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အခန်းကဏ္ဍကစားနေသည်။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာများအတွက်အလင်းသံကနေစိတ်ကြိုက်လုပ်ငန်းအသွားအလာပြုသောပူဇော်သက္ကာ, ကောင်းစွာသောတိုက်, THE oa, Rami, SHRILL, အံ့ဖွယ် Mrs ။ MAISEL နောက်မှအဘယ်သို့အရိပ်၌လုပျဆောငျအခြားဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများအကြားနေ့စဉ်သတင်းစာများ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အလယ်အလတ်, archive ကိုများနှင့်ဒေတာဝန်ဆောင်မှုများ, ပါဝင်သည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေနှင့် Los Angeles မြို့ နယူးယောက်နှင့်တိုရွန်တိုရန်, အလင်းသံချောမွေ့နှင့်အကျိုးရှိစွာအတွေ့အကြုံအတွက် Pre-ထုတ်လုပ်မှုကနေပါဝင်ပတ်သက်အရောင်နဲ့ Front-အဆုံးအသင်းများနှင့်အတူတည်နေရာအကွာအဝေးကနေဘဏ်ဍာဝန်ဆောင်မှုပေး။
"ကျနော်တို့ကဤထူးချွန်စီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ဂုဏ်ပြုနေကြတယ်" ဟုပတေရုသ Cioni, အလင်းသံရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ ဖိုင်-based Workflows လောင်စာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအချိန်ပေါ်နှင့်ဘတ်ဂျက်အပေါ်ဖန်တီးမှုရူပါရုံကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို coupled Episode အချိန်ဇယား၏တောင်းဆိုချက်များကို၏ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့နားလည်မှု။ ၎င်း၏အဓိကမှာအလင်းကိုသံ Panavision မိသားစု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျနော်တို့ပုံရိပ်ကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံးထိရောက်စွာဖန်တီးပြီးမှတဆင့် Pre-ထုတ်လုပ်မှုကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပူဇော်, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်၏။ "
အဆိုပါစီမံကိန်းများမှာတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်အလင်းသံနှင့် Panavision ကနေအဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေပြ:
သာ. မြတ်သောကျေးဇူးကိုကြံစည်, ရာသီ3(FX) - ယခုပင်လျှင်စတုတ္ထရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုး, ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာရာ၌သူမ၏သမီးသုံးယောက်ပြုစုပျိုးထောင်ဆမ် Fox က (Pamela Adlon), အဘယ်သူမျှမ filter ကိုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောမိခင်နှင့်အလုပ်လုပ်သရုပ်ဆောင်၏စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ဆငျးရဲဒုက်ခအောက်ပါအတိုင်း Los Angeles မြို့။ ရာသီအလင်းသံရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာများ colorist ဂရက်ဂိုရီဓမ္မဆရာများနှင့်ပစ colorist Corinne Bogdanowicz နှင့်အတူပူးပေါင်းသူကိုရှင်ပေါလု Koestner အားဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ Panavision ဟောလိဝုဒ် ကင်မရာနှင့်မှန်ဘီလူးအထုပ်ဖြစ်သည်။
ကောင်းစွာသောတိုက်, ရာသီ3(ဖြစ်သော CBS All Access) - "။ တီဗီမှာအကောင်းဆုံးကိုပြပွဲ" Entertainment ကအပတ်စဉ်အဖြစ်ကောင်းစွာသောတိုက်၏တတိယအရစ်ကျလာတာပါ Fred သည် Murphy, ASC အားဖြင့် Shot, ဒီရာသီစတီဗင် Bodner ထံမှအင်ဒရူး Hodgdon နှင့်နောက်ဆုံးအရောင်အားဖြင့်နေ့စဉ်သတင်းစာများနှင့်အတူအလင်းသံများကထောက်ခံခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း Panavision နယူးယောက်နေဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
THE oa, ရာသီ2(Netflix) - THE oa ၏ပထမဦးဆုံးရာသီလျင်မြန်စွာတစ်အစွန်းရောက်ပန်ကာအခြေစိုက်စခန်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အလွန်မျှော်လင့်ဒုတိယအရစ်ကျများအတွက်အလင်းသံအင်ဒရူး Hodgdon နှင့်ဂျော့ခ်ျသောမတ်စ်မှ Ian Vertovec နှင့်အတူနောက်ဆုံးအရောင်တန်းတွင်ထင်ဟပ်ခဲ့ပါတယ်နေ့စဉ်သတင်းစာများ colorists ပြုအလုပ်သေချာစေရန်စီးရီး DPS စတီဗင် Meizler နှင့် Magnus Nordenhof Jønckနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ န်ဆောင်မှုများ San Francisco မှာတည်နေရာထောက်ခံမှုပါဝင်သည်နှင့် Los Angeles မြို့.
Rami, ရာသီ 1 (Hulu) - နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွက်အီဂျစ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၏သားအဖြစ် 2019 SXSW ပရိတ်သတ် Award ဆု Rami ကြယ်ပွသရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာ-လူရွှင်တော် Rami Youssef ၏ Winner ။ အလင်းကိုသံနောက်ဆုံးအရောင်တန်းစတိဗ် Bodner အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်ရှိရာကပစသို့ချောမွေ့စွာလွှဲပြောင်းပေးသောနေ့စဉ်သတင်းစာများအတွက်ကြည့်တည်ထောင်ရန်ရိုက်ကူးရေး Adrian ဖုန်ကြားရှင် Correia နှင့်အက်ရှလေ Connor နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကင်မရာများနှင့်မှန်ဘီလူး Panavision နယူးယောက်တို့ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
SHRILL, ရာသီ 1 (Hulu) - မဟုတ်ဘဲသူမ၏ခန္ဓာကိုယ် - အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများ Lorne မိက္ခေလနှင့်ဧလိရှဗက်ဘဏ်များနှင့် showrunner လီ Rushfield မှစ. SHRILL Annie, သူမ၏ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုလားတဲ့သူတစ်ဦးအဝလွန်မိန်းမငယ်အဖြစ် (Saturday Night Live ထံမှ) Aidy Bryant သရုပ်ဆောင်။ အများကြီးရေးခဲ့တဲ့အနောက်အားဖြင့် 2016 စာအုပ် 'အပေါ်အခြေခံပြီး, Vox "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူတစ်ဦးတိတ်တဆိတ်တင်ဒါပုံဖော်ခြင်း။ " စီးရီးကိုခေါ်အလင်းသံ colorist နစ်ခ် Lareau ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ဂျိုး Mead နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. နောက်ဆုံးအရောင်တန်းဖြစ်သည်။
အံ့ဖွယ် Mrs ။ MAISEL, ရာသီ2(အမေဇုံ) - အလင်းသံမေီ Sherman-Palladino အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒီဆုရစီးရီး၏ဒုတိယရာသီပြန်လာ, ရိုက်ကူးရေးအမ်ဒါဝိဒ်သည် Mullen, ASC နှင့်အဲရစ် Moynier အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလင်းကိုသံရဲ့အာရုန်ကိုဘန်းနေ့စဉ်သတင်းစာများအရောင်နဲ့ Steve Bodner ကိုင်တွယ်ပြီးစဉ်အတွင်းနှစ်ခု DPS နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ကင်မရာနှင့်မှန်ဘီလူး options များအဘို့, Panavision နယူးယောက်သွားလာရင်းမှအရင်းအမြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘာအရိပ်, ရာသီ 1 (FX) မ - အမည်တူ၏အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံပြီးဘာအရိပ်၌လုပျဆောငျ Staten Island မှာနှစ်ပေါင်းရာချီများအတွက်အတူတကွ "တည်ရှိ" ကြသူလေး Vampire ၏ဘဝထဲသို့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပုံစံကြည့်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ရဲ့ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင် DJ သမား Stipsen ပုပ်ခရမ်းချဉ်သီးပေါ် Tomatometer ဝေဖန်သူများအနေဖြင့်တစ်ဦး 96% rating ရရှိထားပြီးပါပြီရသောစီးရီးများအတွက်ပြန်လာ၏။ ခရစ်ယာန် Sprenger လေယာဉ်မှူး lensed ။ အလင်းကိုသံနေ့စဉ်သတင်းစာများ colorists ဂရက်ဂိုရီဓမ္မဆရာများနှင့်ယာကုပ် Doforno မှ Ian Vertovec အားဖြင့်ကပစအတွက်ပြီးသွားသို့ကူးသယ်ဆောင်ရသောဒေသခံ Panavision စက်ရုံမှတဆင့်တိုရွန်တိုအတွက်အစောပိုင်းကြည့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.lightiron.com.
2020 HPA Tech မှသီးသန့်အဘို့ထုတ်ပေးအဆိုပြုလွှာနှင့် Call - စက်တင်ဘာလ 12, 2019
Sohonet Apple ကတီဗီများအတွက် ClearView Flex ကို App ကိုစတင်ရန်ရန် - စက်တင်ဘာလ 11, 2019
Rangers ကင်မရာစနစ်စေရန်အနီရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံကထပ်ပြောသည်ဟီလီယမ်နှင့် Gemini အာရုံခံ Options ကို - စက်တင်ဘာလ 9, 2019
ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့်-SocialMeida အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor အလင်းကိုသံ Panavision post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-05-22
ယခင်: Marquis အသံလွှင့် Medway RTVE ထုတ်လုပ်မှုစနစ်က update လုပ်ဖို့ရှေးခယျြ
နောက်တစ်ခု: နယ်သာလန်နိုင်ငံ NLZIET FOR စီမံခန့်ခွဲ OTT ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အနီရောင်ပျားမီဒီယာ